ngwaahịa ewu ewu
Mmelite ihe onwunwe,ọzọ na ọhụrụ nhọrọ
HRC55 2 ọjà China AlTiN ọla mkpuchi mkpuchi bọọlụ N ...
HRC65 4Flute square ewepụghị blue nano mkpuchi Car ...
Na-enye ihe ngwọta nke ụdị ọ bụla,site na mmalite ruo ọgwụgwụ
Anyị nwere ndị ọrụ 50, gụnyere ndị otu R&D ọkachamara 25, yana otu ndị ahịa na ọrụ nke karịrị mmadụ iri.
Anyị webatara ISO9001 (ụdị 2008)/ISO9001 (ụdị 2015)/ISO14001 (ụdị 2004)/ISO14001 (ụdị 2015) sistemu njikwa, jikọtara ya na mmepụta n'ezie, wee nweta nsonaazụ mbụ.
Na nhọrọ nke ihe, Gu10 na-eji HRC45 ka HRC55, Gu12 na-eji maka HRC55 ka HRC65.There ihe karịrị 10 pcs egweri igwe na carbide mkpara na-emepụta ígwè ọrụ, si carbide ntụ ntụ na carbide mkpanaka, dabere na okpomọkụ ọgwụgwọ, ịpị. wdg, a na-emecha mkpanaka carbide n'ala, a na-emepụta mkpanaka carbide n'ala site na igwe na-egweri.Site na ngwaọrụ nnwale, a ga-anwale mkpanaka carbide ọ bụla.
Ụlọ ọrụ Chengye Co., Ltd.Carbide ngwaọrụ na-emepụta
A na-eji igwe igwe ngwụcha eme ihe n'igwe igwe kwụ ọtọ na-edozi oghere na mbara ala, a pụkwara iji ha na-edozi elu ndị nwere ọdịdị.
Ụfọdụ ndị mmekọ &ndị ahịa anyị na ha rụkọrọ ọrụ
China Milling Cutter Onye naegbu nri China Ball End Mill Ngwá ọrụ Carbide Ngwa lathes Carbide Burrs